Xulka Talyaaniga oo aad ugu farxay war kasoo baxay Xiriirka caalamiga ah ee FIFA | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Xulka Talyaaniga oo aad ugu farxay war kasoo baxay Xiriirka caalamiga ah...
(Hadalsame) 17 Jan 2022 – FIFA ayaa go’aamisey in la cafiyo dhammaanba jaallayaashii la qaatay intii lagu jirey isreebreebka KA2022, taasoo ka dhigan in laacibiin ay ka mid yihiin Gigio Donnarumma iyo Nicolò Barella aysan halis ugu jirin inay seegaan kulanka final-ka ah, haddii ay soo baxaan.
Xulka Azzurri ayaa lumiyey fursad uu toos ugu soo bixi kari lahaa Qadar 2022, sidaa darteed waxay ciyaarayaan kulamo kala bax ah oo u samaysan nus-dhamaad iyo dhammaad ahaan.
Waxay kulanka hore ku wajahayaan North Macedonia oo ay Palermo kula ballansan yihiin Maarso 24. Turkey iyo Portugal oo ah labada kale ee nus-dhamaadka ka tirsan ayaa iyaguna dheelaya Maarso 29.
Nicolò Barella, Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini, Federico Chiesa, Gianluigi Donnarumma, Lorenzo Insigne, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina, Rafael Tolói iyo Sandro Tonali ayaa seegi kari lahaa dhammaadka haddii ay jaalle ka qaataan kulanka North Macedonia.
Federico Chiesa ayaase caadiyan isagu laba jeeraba dhaawac ku seegaya kulamadan go’aaminaya aayaha Azzurri ee KA2022 kaddib markii uu ku dhaawacmay kulankii Roma todobaadkii tegey.
24-jirkan ayaa garoomada seegaya ugu yaraan inta ka dhimman fasal-ciyaareedkan oo idil.
Previous articleXOG: DP World oo laga cayrin rabo Dekedda Boosaaso (MW Deni oo 5 qodob oo muhim ah aqbalay)
Next articleJawaab uu bixiyey Wasiir ka tirsan Somaliland oo sii kordhisey tuhunka ku saabsan Itoobiya & Saylac (Daawo)